(Vilka arbetar på vårdcentralen?)
Dadka ka shaqeeya xaruunta caafimaadka waxaa ka mid ah takhaatiir, kalkaalisooyin caafimaad, mararka qaarkoodna la taliyeyaal amuuro bulsho iyo cilmi-nafsi-yaqaanno.
Takhaatiirtu waa kuwo takhasus guud leh oo in door ah wax ka garanaya cudurro badan iyo dhibaatooyin caafimaad. Takhtarku wuxuu ka salgaaraa cudurka haya bukaansocodka, isagoo wareysanaya oo baaritaanno marinaya bukaansocodka.
Kalkaalisooyinka caafimaad ee Iswiidhan waa dad tacaliin sare leh oo sanado badan jaamicado soo dhigtay, waxeyna mas’uul ka yihiin xannaanada bukaansocodka.
La taliyeyaasha amuuraha bulshada iyo cilmi-nafsi-yaqaanada waa dad tacliin sare leh oo xaruunta daryeelka u jooga inay la kulmaan bukaansocodka xaaladdooda qalbi aysan wanaagsaneyn.
Rugta caafimaadka carruurta, BVC, waxaa lagu tallaalaa, laguna hubiyaa caafimaadka carruurta ilaa ay ka buuxinayaan 6 sano. BVC waxaa sidoo kale laga heli karaa talo ku saabsan wax allaaleh iyo wixii khuseeya caafimaadka carruurta, waxaana laga mid noqon karaa koox waalid.
Daryeel caafimaad arday
Carruurta dugsiyada dhigta waxey dugsigooda gudahii ku leeyihiin xaruun daryeel caafimaad. Halkaa waxaa ka shaqeeya oo jooga takhtar iyo kalkaaliso caafimaad.
Xaruunta daryeelka waxey la socotaa horumarka ardeyda, waxeyna tusaaleysaa nolol caafimaad leh, iyadoo masalan uga warbixisa oo barta raashinka caafimaadka leh, kana wacyigelisa balwadda. Ardeyda halkaa waa lagu tallaala, laguna baaraa si loo hubiyo caafimaadkooda.
Ardeyda daryeelkooda caafimaad waa bilaash.
Rug dhallinyaro, UMO
Rugta dhallinyarada waxaa loogu talogalay in gabdhaha iyo wiilasha oo ay da’dooda ka yar tahay 23 jir ay ka helaan talobixin xagga arrimaha galmada iyo wadanoolaanshaha.
Wixii faahfaahin ah ka akhriso bogga UMO: www.umo.se
Faahfaahinta waxaa lagu helayaa luuqado kala duwan.
Daryeelka maskaxeed ee carruurta iyo dhalleinyarada, BUP
(Barn- och ungdomspsykiatri, BUP)
Carruurta iyo dhallinyarada ay da’doodu ka yar tahay 18 jir waxay tagi karaan daryeelka maskaxeed ee carruurta iyo dhallinyarada, BUP. BUP wuxuu caawinaa carruurta iyo dhallinyarada dhibban ama xaaladdooda maskaxeed aynan wanaagsaneyn.
BUP waxaa ka shaqeeya cilmi-nafsi-yaqaanno, la taliyeyaal bulsho iyo taakhaatiir.
Wixii faahfaahin ee ku saabsan BUP ka akhriso bogga BUP ee magaalada Stockholm: www.bup.nu
Xaruun ummuliso/caafimaadka hooyooyinka
(Mödravårdcentralen – MVC)
Xaruunta ummulisooyinka, oo magaca kale ee loo yaqaan uu yahay rugta caafimaadka hooyooyinka, MVC, wuxuu bilaash ku daryeelaa haweenka uurka leh muddada ay xaamilada yihiin oo dhan. Ummulisada waxey ilaalineysaa in hooyada iyo ilmaha uu caafimaadkooda wanaagsan yahay. Xaruunta ummulisada waxaa sidoo kale abbayaasha iyo hooyooyinka ay ka qaataan casharro ku saabsan waalidnimada. Waxyaala halkaa lagu barto waxaa ka mid ah ummulinta, nuujinta iyo sida ilmaha dhalanaya loo daryeesho.
(För dig med funktionsnedsättning)
Dadka naafada ah ama dadka leh carruur naafo ah waxa la siin karaa taageero iyo caawimo u fududeynaysa nolosha. Xafiiska Degmada ayaa qofka ka caawin kara in uu helo taageero iyo daryeel ku habboon waxbarasho, shaqo, hoy ama ka qayb qaadashada hawlaha madadaalo. Inta badan taageerooyinka xafiisyada deegaanku bixiyaan waa in qofku shaqsiyan dalbadaa.
In waddan inta laga guuro oo mid kale la dego, oo misna xilli magangelyodoonnimo la maro, waxey noqon kartaa arrin nafta cadaadis weyn ku keenta. Waxaa markaa la dareemi karaa hilow weyn, murugo, hurdada oo xumaata ama feejignaanta oo yaraata. Hadduu cadaadiska nafta hayaa uu dabadheeraado waxaa jirta halis ah in taa caafimaadka saameyn weyn oo xun ku yeelato.
Haddii la dareemo cadaadiska inuu yahay mid aad u weyn, waa inaannan lagala xishoon in arrintaa dad kale lagala hadlo.
Marka hore ruux lagu kalsoon yahay. Haddii gorfeynta dhibta taakulo loogu baahdo, waxaa taa loo raadsan karaa daryeel caafimaad.
Daryeel dhaawac maskaxeed
Dadka ka dhaawacan maskaxda waxaa Stockholm uga furan laba rugood oo gaar ah. Waxaa halkaa lagu daryeelaa dad ay la soo gudboonaadeen arrimo culus, sida masalan qaxooti soo maray dagaal ama loo geystay iqaab-jir. Ruuxa isagaa iskii rugaha middood ula xiriiri kara. Waxaa sidoo kale gudbin laga heli karaa xaruun daryeel caafimaad.
Xaruunta laankheyrta cas ee qaxootiga la soo iqaabay, RKC
Jinsiga iyo wada-noolashada
(Sex och samlevnad)
Waxaa jira rugo badan oo ka talobixiya galmada iyo wadanoolaanshaha. Talobixinta waxey masalan noqon kartaa xagga xiriirrada, uurka ama qalabka ka hortagga uureysiga iyo cudurrada galmada. Waxaa xitaa halkaa lagu qaadaa saamiyo, waxaana laga helaa macluumaad ku saabsan cudurrada galmada ama hiv/aids. Taakulada halkaa laga helaa inta badan waa bilaash.
Faahfaahinta ku saabsan galmada iyo wadanoolaanshaha ka akhriso bogga Daryeel-tilmaamaha: